I-Deluxe yegumbi elinye lokulala elinendawo yokulala enendawo yokujonga ulwandle! - I-Airbnb
I-Deluxe yegumbi elinye lokulala elinendawo yokulala enendawo yokujonga ulwandle!
I-Comfort idibana ngokulula kwiKlabhu yaseKa'anapali Beach, ekunxweme lwaseMaui olusentshona kwimizuzu nje ukusuka kumbindi wedolophu yaseLahaina.
I-Covid-19 Iiprothokholi zokucoca eziphuculweyo zikhona.
• Undwendwelo lokungena kufuneka lube neminyaka engama-21+ kunye ne-ID esebenzayo.
• Undwendwe kufuneka lube nedebhithi/ikhadi letyala lokubeka idipozithi yokhuseleko eyi-$1 ekubambeni kuyo kwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide.
• Igama ekubekelwe kulo kufuneka lihambelane ne-ID yefoto xa ungena.
• $12.13/irhafu yendawo yokuhlala iyafuneka kwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide.
• Onke amagumbi anikwe indawo ekuchithelwa kuyo iiholide.
• Uhlobo lwebhedi luya kuba yiKumkani e-1 OKANYE iiMbumba ezi-2.
Phumla echibini, ubekwe phakathi kwendawo entle kunye neengxangxasi ezizolileyo, okanye usele ikofu yakho yasekuseni kwindawo evulekileyo yekhefi. Ngendawo yokutyela ekwisiza kunye nevenkile elula, uya kuba nayo yonke into oyifunayo ukuze wenze uninzi lweholide yakho yaseMaui. Yonwabela nokuba yimbonakalo yolwandle okanye intaba kwibalcony yakho yabucala, kwaye uphinde uqhagamshelane nabantu obathandayo kwindawo yokuhlala ebanzi eneefriji ezigcweleyo kunye neebhafu ezinkulu ezineshawa eyahlukileyo.
Ubuninzi bendawo yokuhlala: 4
Ukuhlala kwaBucala: 2
Ubungakanani: malunga ne-820 sq. ft.
Ibhedi yaseKumkani OKANYE iibhedi ezi-2 eziphindwe kabini
Ibhalkhoni okanye iPatio (amagumbi athile)
Ukukhubazeka okufikelelekayo kwiNdawo zokuHlala
Inkonzo yokuphendula ivoyisimeyili
Isixhobo sokuhlamba izitya
Igumbi lokuhlambela eligcweleyo
Imiboniso bhanyabhanya ye-Pay-Per-View
Izindlu zangasese eziphakanyisiweyo
Ukufikelela elwandle (Kulinganiselwe)
Umboniso bhanya-bhanya/Urentiswa ngeDVD
Ichibi laBantwana langaphandle
Idama elishushu langaphandle elinesilayidi
Ichibi elishushu langaphandle
Iityhubhu ezishushu zangaphandle
Umatshini wemali / Banking
Inkonzo yogcino lwezindlu
Izixhobo zokuhlamba impahla
ICafe/Ivenkile yekofu okanye iNkonzo
• Indawo yokupaka: Akukho ntlawulo
• Ukutshaya: Hayi
• Izilwanyana zasekhaya: Hayi
• Le yindawo ekuchithelwa kuyo ixesha kodwa ukuzimasa inkcazo-ntetho okanye ukukhenketha AKUFUNI.
• Ekubeni indawo ekuchithelwa kuyo iiholide igcina zonke iiyunithi, ukuhonjiswa kweyunithi kunokwahluka kancinane kwiifoto ngenxa yohlaziyo lwendawo ekuchithelwa kuyo iiholide kunye/okanye utshintsho.
• Zonke iiyunithi zabelwe indawo ekuchithelwa kuyo iiholide. Imbonakalo yeyunithi, umgangatho, kunye nendawo yeyunithi kwipropathi ayinakuqinisekiswa.
• Amaxabiso kunye nokufumaneka kunokwahluka.
• Iindwendwe kuya kufuneka zithobele nayiphi na imigaqo/imigaqo ye-COVID-19 ebekwe nguRhulumente.
• Abaqeshi baya kuyisebenzisa kwaye bayigcine iNdawo ekuchithelwa kuyo iiholide ngononophelo nesemthethweni kwaye abayi kudala ngxolo okanye ziphazamiso ezinokuphazamisa okanye zicaphukise abanye abaqeshi. Umqeshi uqinisekisa ukuba baya kulandela yonke imigaqo-nkqubo kunye nemithetho yendawo ekuchithelwa kuyo iiholide, njengoko bexelelwe xa befika kunye nokuhlala kwiyunithi, kubandakanywa nexesha lokuphuma, njengoko iindawo ezininzi ekuchithelwa kuzo iiholide zivavanya umrhumo wokuphuma kade.
• Umqeshi wamkela lonke uxanduva lwawo nawuphi na umonakalo kwiyunithi okanye kwipropati yeNdawo ekuchithelwa kuyo iholide ngexesha lokurenta nguMqeshi okanye iindwendwe zoMqeshi.
• UMqeshi ngoku ukhusela kwaye ugcina uMnini engenabungozi kuwo nawaphi na nawo onke amabango empilo/esigulo, umonzakalo okanye umonakalo wepropathi okanye ilahleko yalo naluphi na uhlobo olubangelwe kusetyenziso lweNdawo ekuchithelwa kuyo iiholide nokuba injani ingozi, ukwenzakala okanye ilahleko.
Le yiyunithi yeshare egqithiselwa ngokupheleleyo - ke ubhukisho lubhukishwe phantsi kwegama lomntu ongundoqo ongenayo. Ukungena kufana namava ehotele.
Ukuhamba ngephenyane/Ukuhamba ngesikhephe
Ukukhwela ibhayisekile/ukuRenta ibhayisekile
Igalufa - Ukubeka Green
IHelikopta / Ukubonwa kweNqwelo-moya
IiRenti zeJet Ski
Itheyibhile yeTennis/Ping Pong
Iinkonzo ezikufutshane - iiMayile ezi-5/8 yeekhilomitha
Iinkonzo zokuphulula umzimba
Izimvo eziyi-6 928